Ny fambolen-kazo sy ny nonoka...
♦ Ny politikan'ny fambolen-kazo dia nohatsaraina, nomena lanja " Ny fambolen-kazo ilaina ary manakaiky ny vahoaka" ohara zaza iray mamboly hazo iray. Maherin'ny 75.000 Ha ny fitambaran'ny velarana hovolena hazo manomboka ity volana janoary ity... ♦ Ny nonoka dia zava-maniry ao anatin'ny fianakaviamben'ny "Moracées", manana haavo 1,5 hatramin'ny 3,5 metatra, zava-maniry manasitrana aretina maro...
Nanasitrana olona maro... Izy
Alarobia 13 janoary 2021 — Herinandro voalohany mandavantaona — Mitenena, Tompo ô, fa mihaino ny mpanomponao. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 1, 29-39
[Vaovao hariva] Talata 12 janoary 2021
♦ Nodimandry androany tolakandro teo amn'ny faha-89 taonany i Mompera Mario Prina, avy amin'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco... ♦ Mitsoaka ny kere any amin'ny faritra misy azy ireo mponina any atsimon'ny nosy... ♦ Tsy raikitra androany ny fitsarana ireo Malagasy telolahy, atsy Afrika Atsimo, nitondra volamena antsokosoko...
Ny tanjona sy ny tarigetra...
Ny tanjona sy ny tarigetra dia samy hafa mihitsy. Ny fiainana dia misy dingana marobe hanatrarana tanjona iray na maromaro. Ny tanjona dia faniriana zavatra tiana ho tratrarina ary mety ho tratra. Ny tarigetra kosa dia filamatra izany hoe faniriana zavatra tsara tiana sy ezahina hiainanana andavanandro. Ny teknika dia fomba entina hanatanterahana ny asa, izay azo ianarana ary azo hiombonana. Ny Paik'ady dia vokatry ny haranintan-tsain'ny tsirairay ary mampisongadina ny maha izy azy...
Pejy 2 amin'ny 108